Ihe kpatara ibute na ịfụfụ nke PVC egwuregwu egwuregwu na usoro ọgwụgwọ-News-Topflor China nwere oke
Ihe na-akpata arching na ịfụfụ ụfụfụ nke egwuregwu PVC na usoro ọgwụgwọ
Echiche:50 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-10-14 Mmalite: Saịtị
Floorlọ PVC bụ ụdị ihe ịchọ mma dị ala nke dị fechaa, nke na-ewu ewu n'ụwa taa. Ọ banyere ahịa ndị China kemgbe mmalite 1980s. Ruo ugbu a, a matala ya nke ọma ma tinye ya n'ọrụ na tennis tenis, bọọlụ basketball, mgbatị ahụ na ebe ndị ọzọ na obodo ukwu na ọkara. Agbanyeghị, n'ihi na anyị amaghị ọtụtụ ihe gbasara ụzọ eji ewu ụlọ na nkọwapụta nke egwuregwu egwuregwu PVC, anyị na-efunahụ mgbe anyị hụrụ nsogbu. N'etiti ha, nsogbu dịkarịsịrị ike bụ: obere oge ka emechara ụlọ ahụ, a ga-agbada ala ahụ ma gbaa ụfụ, nke na-emetụta ọ bụghị naanị ịma mma ya, kamakwa ọ na-emetụta ndụ ọrụ ya, nke na-eme ka ndị mmadụ nwee nnukwu nchegbu. Yabụ, ị maara ihe kpatara eji agba ụlọ egwuregwu PVC? Gịnị ka anyị kwesịrị ime?
Tupu ị ghọta ihe kpatara ị na-akụ na ịkwanye egwuregwu PVC, ọ dị mkpa ịghọta ọnya na ịda ụta. Dị ka aha ahụ na-egosi, blistering na-ezo aka na ntoputa nke ala ma na-ama jijiji; mgbe arching bụ The ala nwere a curvature. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe doro anya dị ka ọnya site na anya na mmetụta, a ga-enwe mmetụta nke nkwụsịtụ mgbe ị na-azọ ụkwụ na ya.
1. Ihe na-akpata ụfụfụ na ịkwanye egwuregwu PVC
N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere isi ihe abụọ:
1. Karịsịa n'ihi ntọala ahụ. Ọ bụrụ na nguzogide mmiri nke ntọala injinia adịghị mma; flatness na harden nke ntọala erughị eru; ntọala ahụ adịghị akpọ nkụ kpamkpam na mmiri mmiri karịrị 3%. Nsogbu ndị a ga - eme ka ịza ụfụfụ nke ụlọ egwuregwu PVC na-arụ ọrụ n'oge ikpeazụ.
2. Nhọrọ nke ihe inyeaka, ihu igwe, ọnọdụ okpomọkụ na njikwa ụlọ adịghị mma. Dịka ọmụmaatụ, nhazi nke onwe ya adịghị akpọnwụ, imetọ onwe ya dị njọ, na gluu adịghị mma; usoro ihe owuwu ihe owuwu ahụ dị ntakịrị, iru mmiri n'oge usoro ihe owuwu ahụ dị elu, oge jụrụ ajụ ezughị, ala nsị adịghị mma, wdg; Mmiri mmiri n'okpuru ala, wdg, ga-eme ka ala egwuregwu PVC na-afụ.
[Mmezi atụmatụ] Ọ bụrụ na enwere otutu blisters na PVC ala, ọ ga-adị mkpa ka enwetaghachi ya. Ọ dị mma ịmara na ọ bụrụ na ebe a na-ewu ihe bụ oghere mechiri emechi nke nwere oke iru mmiri na enweghị ikuku, a ga-agbatịkwu oge ihicha onwe ya.
Nke abuo, ihe kpatara uzo nke ala egwuregwu PVC
1. E nwere nsogbu na oghere nkwonkwo echekwara, ya bụ, a na-edebe ihe mmeba na-ezughị ezu, ma ọ bụ nkwonkwo gbasaa jupụtara na gypsum, putty, wdg, nke mere na ala PVC enweghị ike ịgbatị n'oge echichi, nke ga-eme ala kporo;
2. Nsogbu mere n'oge echichi nke ala egwuregwu PVC, ya bụ, n'oge usoro echichi ahụ, e nwere ahụ ndị mba ọzọ n'okpuru ala ma ọ bụ na e nwere ala, ọ ka bụ ala osisi siri ike. Ọnọdụ abụọ a ga - eme ka etinyere ala egwuregwu PVC mgbe etinyere ya. Arching ruru ka keguru mmiri.
[Atụmatụ mmezi] Wepụ bọọdụ skirting ma debekwa ebe nkwasawanye; tinye eriri na njikọ dị n'etiti ime ụlọ na ime ụlọ ahụ; wughachi eriri skirting, wepu akwa ahụ, putty, wdg; imeghe ala ma tinyeghachi; wepụ ala iji mee ka ala ahụ dị larịị ma kpọọ nkụ, Ma dina ịtọgbọ ala ọzọ.
Ọfọn, nke dị n'elu bụ ihe kpatara arching na ụfụfụ nke ala egwuregwu PVC. Enwere m olileanya na onye ọ bụla nwere ike ịghọta ya ma tinyekwuo uche na ya n'oge ntinye na usoro iwu iji zere nsogbu.
Floorkwanyere ihe owuwu ụlọ PVC （1）